मन्त्री भट्टराईको प्रश्न, ‘जहाजमा लैजाने के के माल छ तपाईहरुसँग ?’ - Everest Dainik - News from Nepal
मन्त्री भट्टराईको प्रश्न, ‘जहाजमा लैजाने के के माल छ तपाईहरुसँग ?’
पोखरा: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रश्न सोधेपछि पोखराका जनप्रतिनिधि एकछिन अक्मकाए ।
निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्ने क्रममा मन्त्री भट्टराईले प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।
नाफा भएपछि मात्रै जहाज चल्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले मान्छे ओसारेर मात्रै जहाज नाफामा नजाने बताएका थिए । त्यसपछि उनले सोधे, “मान्छेबाहेक प्लेनमा बोकाएर पठाउने के छ तपाईंहरुसँग ?”
मन्त्रीको आशय पोखराबाट अन्य क्षेत्रमा उत्पादनमूलक सामग्री कार्गोमार्फत पठाउन सके जहाज नाफामा जान्छ भन्नेतर्फ थियो । उनले अगाडि भने, “हवाइजहाजले मान्छे मात्रै नबोकेर व्यापार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यहाँबाट कार्गो हुन सक्छ। कार्गोका निम्ति मालसामान चाहियो। अब माल बोकेर जानुपर्‍यो। माल के छ तपाईंहरुसँग ? तपाईंले के माल बोकाएर पठाउनुहुन्छ प्लेनमा ? सोच्नुस्।”
मन्त्रीले पोखराका मानिसहरुले टनका टन माल बोकेर जाने किसिमले उत्पादन गर्न सुझाव दिए ।
विमानस्थल बनिसकेपछि पोखराका हालका सडक उपयुक्त नहुने, हालकै होटलले व्यापार गर्न नसक्ने बताए। सडकलगायत पूर्वाधार स्तरीय बनाउन तयारी थालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। सडकको कुरा पोखरा विमानस्थलसँग सम्बन्धित भएपनि आफ्नो जिम्मा नभएको उनले जनाए। त्यसका लागि आवश्यक परे आयोजना, प्रदेश र स्थानीतहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनपर्ने उनले बताए।
मन्त्री भट्टराईले पोखरा विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हरेक दिन अनुगमन भइरहने बताए। उनका अनुसार अध्यागमनले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, भिसा जाँच, कस्टम लगायतका लागि आवश्यक तयारी गरेको छ।
ट्याग्स: Pokhara Airport, पाेखरा विमानस्थल, याेगेश भट्टराइ